Ahoana ny fandefasana ny efijery smartphone amin'ny solosaina | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fandefasana ny efijery smartphone amin'ny solosaina
Ignatius Room | | Finday, solosaina, takela-bato
Raha mikasika ny fandaniana atiny amin'ny Smartphone na Tablet-nao, azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nieritreritra fa tsara raha afaka mankafy azy eo amin'ny efijery lehibe amin'ny efitranonao, mba hankafizanao ny atiny amin'ny be dia be. efijery lehibe kokoa ary afaka mankasitraka tsara ny pitsopitsony rehetra. Ny fankafizana ny atiny amin'ny efijery fandraisam-bahinintsika na eo amin'ny efijery amin'ny solosaintsika dia dingana iray izay mety hanery antsika hanao fampiasam-bola kely. Eo an-tsena dia manana safidy maromaro azontsika atao isika asehoy ny atin'ny Smartphone na Tablet-nay amin'ny efijery lehibe kokoa, na amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko, fitaovana na fampiasana ireo fampiasa DLNA izay atolotray antsika Smart TV.
Eo an-tsena isika izao dia afaka mampiasa AirPlay, Google Cast ary Miracast hahafahantsika mandefa ny efijery amin'ilay fitaovana amin'ny solo-saintsika, ny mpamokatra rindrambaiko tsirairay avy dia nisafidy teknolojia iray izay mamela antsika hanao toy izany koa, saingy amin'ny anarana samihafa .
1 Hizara ny efijery iPhone na iPad anao amin'ny Mac
1.2 Reflecteur 2
2 Mizarà efijery iPhone na iPad amin'ny Windows PC
2.2 Reflecteur 2
3 Mizarà ny efijery an'ny Smartphone Android na Tablet amin'ny Mac
3.1 Stream Stream
3.4 Ashot - Pikantsary sy sary nalaina tao amin'ny Android
3.5 Reflecteur 2
4 Mizarà ny efijery an'ny Smartphone Android na Tablet amin'ny Windows PC
4.1 Stream Stream
4.3 Ashot - Pikantsary sy sary nalaina tao amin'ny Android
4.4 Reflecteur 2
Hizara ny efijery iPhone na iPad anao amin'ny Mac
AirServer dia mamela antsika handefa ny atin'ny iPhone, iPad na iPod touch amin'ny Mac. Mila macOS 10.8 na taty aoriana mba hiasa ary Izy io dia mifanaraka amin'ny laharana faha-2 an'ny iPad 4, iPhone 5s na iPod touch, ankoatry ny fitaovana tantanan'ny Android, Windows 7 PC, Linux ary na ny Chromebook aza. Ny AirServer dia sarany 13,99 euro. Mba hahafahantsika mandefa ny atiny avy amin'ny iPhone, iPad na iPod touch, tsy mila miditra amin'ny Center Control ihany isika, manidina ny rantsan-tanantsika hatrany ambany ka hatrany ambony ary misafidy ny anaran'ny fitaovana nametrahantsika ny rindranasa.
Sintomy ny AirServer
Alternative misy safidy vitsy kokoa amin'ny AirServer dia Reflector 2, fampiharana tsara izay ahafahantsika mandefa ny atin'ny iPhone, iPad na iPod touch amin'ny Mac na Windows PC, satria multiplatform io. Reflector 2 dia mitentina $ 14,99, lafo kokoa noho ny mpifaninana aminy indrindra, nefa lamin'ny kalitao izay arosony amintsika miaraka amin'ny asany Manery anay hanampy an'io lisitr'ireo rindranasa io izahay hizarana ny efijery ny fitaovana iOS ao amin'ny Mac.
Ampidino ny Reflector 2
fa Moa ve tsy misy fampiharana maimaim-poana hizarana ny efijery amin'ny fitaovana iOS amin'ny Mac? Eny eny, misy, saingy sarotra izy ireo ny mahita raha izay tena tadiavintsika kalitao, 5KPlayer no fampiharana antsika. Ny 5KPlayer dia tsy mamela antsika hanova ny fitaovantsika ho mpandray AirPlay fotsiny, fa izy koa dia mpilalao video mifanentana amin'ireo endrika rehetra hita eny an-tsena, tena mitovy amin'ny VLC.
Sintomy ny 5KPlayer
Mizarà efijery iPhone na iPad amin'ny Windows PC
Raha mitady rindrambaiko izay mifanaraka amin'ny rafitra rehetra ianao hizaranao ny efijeran'ny fitaovana iray, AirServer no anjaranao satria mifanaraka amin'ny rafi-piasana rehetra, na finday na birao, ka io no lasa fitaovana mety indrindra hanehoana ny atiny ny fitaovana ampiasainay amin'ny solosaina ary soraty ny efijery na ankafizo ny atiny izay tsy azontsika zaraina amin'ny solosaina. Ny AirServer dia sarany 13,99 euro Ary amin'ireo rindranasa rehetra ahafahantsika manao an'io asa io dia io no soso-kevitra indrindra indrindra ho an'ny rehetra, tsy ho an'ny kalitaony atolotra antsika ihany fa ho an'ny vokatra tsara sy mifanentana amin'ireo fitaovana.
Reflector 2 dia iray amin'ireo safidy hafa izay hitantsika eny amin'ny tsena ary hijoro amin'ny AirServer raha tsy satria tsy manome antsika fampifanarahana mitovy. Vantany vao nividy ilay fangatahana izahay, dia mitentina $ 14,99, na nampidinintsika hanandrana azy maimaim-poana, mila miala fotsiny ny rantsan-tanantsika hatrany ambany isika mba hampisehoana ny Center Control ary hisafidy ny anaran'ny fitaovana tiantsika hizarana ny efijery, na amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan-tahaka azy io na amin'ny alàlan'ny mandefa ny atiny rehetra amin'ny solosaina.
Na eo aza ny fampiharana maimaimpoana dia manome antsika ny 5KPlayer valiny tena tsara rehefa mampiseho ny atin'ny badge iOS amin'ny Windows PC. Ho fanampin'izay, araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ny 5KPlayer dia mpilalao mahay ihany koa izay afaka mamerina izay fisie horonan-tsary amin'ny solosaintsika. Ny hany zavatra tsy tiako momba ilay rindranasa, ny fametrahana teboka ratsy eo aminy mba tsy hiheveranareo ahy fa karamaiko ny miresaka tsara momba azy, dia ny kisary fampiharana, kisary miseho izay mifanaraka rehetra fisie. Ny kisary dia manome fahatsapana fampiharana taloha sy tsy tohanana, amin'ny fampiasana ilay skeumorphism izay nanjary nalaza be teo amin'ny sehatra iOS hatramin'ny nanombohany.
Mizarà ny efijery an'ny Smartphone Android na Tablet amin'ny Mac
Ity fampiharana Android ity dia mamela antsika zarao ny atiny rehetra aseho eo amin'ny efijery an'ny Smartphone mivantana amin'ny ankamaroan'ny tranonkala mpitety tranonkala, noho izany dia tsy terena hametraka rindranasa amin'ny Mac izahay. Ny tsy ho azonay raha mampiasa an'ity rindrambaiko maimaimpoana ity dia ny feo dia tsy nafindra, ny sary ihany ary misy ny taraiky indraindray. Raha vantany vao nosokafanay ny rindranasa, ny Screen Stream dia hanolotra URL anay avy amin'ny tamba-jotra, URL izay tsy maintsy ampidirinay ao amin'ny tranokalanay.
Fandefasana efijery mihoatra ny HTTP
Developer: Dmitry Krivoruchko
Toy ny ankamaroan'ireo karazana rindranasa ireo, AirDroid dia natao hahay hizara ny atiny izay aseho eo amin'ny efijery ny fitaovana Android-tsika amin'ny solosaina mba makà pikantsary na fandraisam-peo. Tsy toy ny rindranasa hafa, ny fizotrany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fifandraisana Wi-Fi, ka na ilay solosaina resahina na ilay fitaovana dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny tambajotra iray ihany.
AirDroid: fidirana sy fisie
Araka ny efa nomarihako etsy ambony, ity fampiharana multiplatform ity dia ahafahantsika mizara ny atin'ny fitaovana rehetra amin'ny Mac na PC, ny Android dia iOS, Windows, Mac, ... mba hitady amin'ny hafa ka ny 13,99 euro vidin-dry zareo dia mitombina tanteraka. Mamela antsika ny developer AirServer andramo maimaim-poana mandritra ny 7 andro ilay app, aorian'izay dia tsy maintsy mahazo fahazoan-dàlana isika raha te hanohy hampiasa azy io.
Raha vantany vao napetraka tamin'ny Mac ny fampiharana, dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fitaovana Android isika ary apetraho ny fampiharana Google Cast, fampiharana izay ahafahantsika mandefa ny atiny rehetra aseho amin'ny fitaovantsika amin'ny efijery lehibe an'ny PC. Ity rindranasa ity dia nosoniavin'i Google ary azo ampidinina maimaim-poana tanteraka.
Ashot - Pikantsary sy sary nalaina tao amin'ny Android
Raha miresaka momba ny rindranasa maimaimpoana afaka mizara ny efijery an'ny Smartphone na Tablet amin'ny Mac isika dia iray amin'izany i Ashot, satria dia loharano misokatra. Ny pikantsary Android sy ny fakana sary dia ahafahantsika mamerina ny efijery misy ny fitaovana Android amin'ny Mac, ary koa amin'ny PC misy Windows na Linux. Noho izany dia mila mametraka ilay rindranasa fotsiny isika ary mampifandray ilay fitaovana amin'ny fampiasana tariby USB mifandraika amin'izany.
Sintomy ny pikantsary Android sy ny fakana sary
Fa raha ny tadiavintsika dia kalitao tsy hizara izay aseho eo amin'ny efijery an'ny fitaovana Android fotsiny, fa izahay koa te handrakitra izay rehetra mitranga ao aminy, ny Reflector 2 no fampiharana mety indrindra amin'ireo filàna ireo. Reflector 2 fampiharana iray izay manana vidiny $ 14,99, saingy azontsika atao ny mampiasa azy io mandritra ny andro vitsivitsy hanandramana raha mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika alohan'ny handehanany mividy azy. Ny Reflector 2 dia mamadika ny Mac antsika ho toy ny fitaovana Chromecast na Apple TV, fa noho izany dia tsy maintsy ampiasaintsika ny fampiharana Google Cast Google, fampiharana izay Ho tompon'andraikitra amin'ny fandefasana izay rehetra miseho eo amin'ny efijery fitaovantsika amin'ny Mac.
Mizarà ny efijery an'ny Smartphone Android na Tablet amin'ny Windows PC
Raha mitady rindranasa izay mamindra ny sary fotsiny ianao fa tsy ilay horonan-tsary amin'ny efijery solosaintsika ary maimaim-poana ihany koa, ity no fampiharana anao. Ny Screen Stream dia rindranasa fototra izay miasa amin'ny alàlan'ny browser rehetra mifanentana amin'ny MJPEG toy ny Chrome, Safari, Edge, Firefox) ka ny fampitana dia dia hanolotra lagoka, izay miankina amin'ny fampiharana ampiasaintsika, dia hanelingelina bebe kokoa.
Anisan'ireo rindranasa karama mamela antsika hamadika ny Windows PC ho mpandray handray ny efijery misy ny fitaovana misy antsika, AirServer dia miavaka na dia eo ambonin'ny Reflector aza, noho ny habetsahan'ny fitaovana manohana azy. Satria, raha miresaka momba ny kalitao, ny hafainganana ary ny fandidiana isika, na ny Reflector 2 na ny AirServer dia samy miasa toy ny ody fiangalianaIzaho aza sahy milaza fa somary haingana kokoa ny Reflector rehefa manomboka mampiseho atiny. Azo alaina maimaimpoana ny AirServer, ahafahantsika mizaha ny serivisy mandritra ny 7 andro, aorian'izay dia tsy maintsy mandeha any amin'ny toeram-pisavana izahay ary mandoa ny vola 13,99 euro.
Mba hampisehoana ny atin'ny Android Smartphone na Tablet-nay amin'ny AirServer dia tsy maintsy mitsidika ny Google Play Store sy ampidino ny fampiharana Google Cast, hahafahanao mandefa ny atiny rehetra aseho amin'ny fitaovantsika mankany amin'ny Windows PC.
Ashot koa dia mifanaraka amin'ny ekosistema Microsoft, ankoatry ny Linux sy macOS, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo fitaovana atolotra indrindra hizarana ny efijery momba ny fitaovantsika amin'ny solosaintsika. Ary, loharano misokatra, azo alaina maimaim-poana amin'ny alàlan'ilay rohy avelako etsy ambany.
Ity fampiharana ity dia iray amin'ireo tsara indrindra azontsika jerena eny an-tsena raha tiantsika alefaso amin'ny Windows PC ny sary. Reflector 2 dia mitentina $ 14,99 ary ahafahantsika mandefa ny atiny izay aseho eo amin'ny efijeran'ny fitaovantsika mankany amin'ny Windows PC misy ny vahaolana mitovy amin'ilay omen'ny fitaovana anay, raha toa ka mifanaraka ny maso. Raha te hampiasa Reflector dia mila apetraka amin'ny fitaovantsika ny fampiharana Google Cast, avy amin'ny tovolahy avy any Mountain View, fampiharana iray izay hahafantatra ny Windows PC antsika, noho ny Reflector 2, handefa ny efijery amin'ny PC-tsika ary afaka mba hankafizanao ny lalao na ny sarimihetsika amin'ny efijery lehibe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » Ahoana ny fandefasana ny efijery smartphone amin'ny solosaina
Noe lynn dia hoy izy:
Misaotra nizara ireo rindranasa ireo dia ampiasaina tanteraka. Manohana? VLC mankany Chromecast
Valiny tamin'i Noe Lynn
Tim Cook: ny tsaho iPhone 8 dia nandratra ny varotra maodely ankehitriny
Ny Youtube dia efa manana maody maizina ary misy safidy fanamorana bebe kokoa